गाईको शरीरमा भेटियो एचआईभीको उपचार : अब गाई मारेर एड्सको उपचार गर्नुपर्ने ! – Nepal's Digital Newspaper
गाईको शरीरमा भेटियो एचआईभीको उपचार : अब गाई मारेर एड्सको उपचार गर्नुपर्ने !
July 24, 2017 nepsnews0Comments ekantipur
एजेन्सी : जब समस्या हुन्छ तब समाधानको खोजी हुन्छ । विश्वमा विभिन्न रोगको उपचार भए पनि एचआईभीको उपचार असम्भव जस्तै देखिएको बेला यसको उपचारमा सहयोग हुने देखिएको छ ।
एचआइभीको लागि भ्यक्सीन बनाउन गाई निकै सहयोगी साबित भएका अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् । प्रतिरक्षाको लागि जनवार यस्तो विशेष एन्टीबडीज उत्पादन गर्छन् जसले एचआइभी निर्मुल पार्न सहयोग गर्छ । अनुसन्धानमा उल्लेख भए अनुसार कम्प्लेक्स र ब्याक्टेरिया युक्त पाचन तन्त्र हुन्छ । उक्त तन्त्रकै कारण गाईको प्रतिरक्षा क्षेमता धेरै विकसित भएको पाइएको अमेरिकाको नेशनल इन्चिटियूट अफ हेल्थले बताएको हो ।
एचआइभी एक घातक प्रतिद्वन्द्वी हो र यसले आफ्नो स्थिती छिट्टै बदल्छ जसले गर्दा भाइरसले विरामीको प्रतिरक्षा प्रणालीमा हमला गर्न बाटो मिल्छ । एउटा भ्याक्सीनले रोग प्रतिरोधक सिस्टम विकासित गर्न सक्छ र एचआइभी संक्रमणको पहिलो स्टेज मै बचाउन सकिने अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् । इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव र द स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीच्यूटले गाईको प्रतिरक्षा क्षमताको बारेमा टेस्ट शुरू गरेका छन् ।
नेचर नामक जर्नलमा प्रकाशित नतिजा अनुसार गाईको एन्टीबडिजबाट एचआईवीको असर ४२ दिनमा २० प्रतिशतसम्म कम गराउन सकिन्छ ।प्रयोगशाला परीक्षणमा ३८१ दिनमा एन्टीबडिज ९६ प्रतिशतसम्म एचआईभीमा असर नगरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ ।
यो अनुसन्धानले गाईमा एड्सको उपचार भेटिएको खबरले अब गाईको हत्या गरेर उपचार खोजिने भएको छ । यो विषयले हिन्दू धर्मावलम्बीमा भने आक्रोश सिर्जना हुन थालेको छ ।एजेन्सी
← ट्याक्टर पल्टिएर दुईको मृत्यु : नौ घाइते, दुइको अबस्था चिन्ताजनक
आईसीसी एसिया यू–१९ विश्वकप छनोट क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको पाँचौँ खेलमा नेपाल पाँच विकेटले विजयी →
शारिरिक रुपमा अपांग धनकुटाका यी युवक विगत १० बर्ष देखि खोरमा बस्न बाध्य
July 16, 2017 nepsnews Comments Off on शारिरिक रुपमा अपांग धनकुटाका यी युवक विगत १० बर्ष देखि खोरमा बस्न बाध्य
यौन सम्पर्कपछि बाथरुम छिरेर महिलाहरु किन रुन्छन ? तपाईले याद गर्नु भएको छ ?
July 17, 2017 nepsnews Comments Off on यौन सम्पर्कपछि बाथरुम छिरेर महिलाहरु किन रुन्छन ? तपाईले याद गर्नु भएको छ ?